amin’ny fifaninanana CAN 2019 tontosaina any Egypte ny Barean’i Madagasikara ka hikatroka amin’ny ekipam-pirenen’i Burundi. Toy ny tamin’ny andro voalohany nandraisany anjara dia hiombom-po tanteraka amin-dry Faneva Ima sy ny namany indray anio hariva ny Malagasy maro an’isa, indrindra ny mpitia baolina kitra Malagasy. Fihaonana 2 ao amn’ny Vondrona C kosa no hanaraka an’io lalao io ka amin’ny 8ora alina Malagasy : Senegal # Algerie ary amin’ny 11 alina Malagasy : Kenya # Tanzanie.
Omaly alarobia 26 jona 2019 i Nigeria mpiray vondrona amin’ny Barea no ekipa voalohany tafita amin’ny dingan’ny 1/8-ndalana amin’ity Can Egypte 2019 ity manana isa 6 ankehitriny raha nandavo an’i Guinée 1–0. Tao amin’ny vondrona A kosa dia nahazoana ny vokatra : Ouganda - Zimbabwe ( 1-1 ) ; Egypte-RdCongo ( 2 -0 ), izany hoe efa mangoron’entana izany i RDC.